Heart Museum: ဟုတ်လားဗျို့!!!
Posted by Heartmuseum at 12:23 AM
ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိဘူး
ပြုံးနေတဲ့ အရုပ်ကလေးကို ကြိုက်လို့ ယူသွားတယ်
Intelligent +stupid= R + M
True. True. Very true. Lol.